၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ ပလက်ဖောင်း စီးပွားရေးကို အကဲဖြတ်ခြင်း - Pandaily
၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ ပလက်ဖောင်း စီးပွားရေးကို အကဲဖြတ်ခြင်း
Jan 17, 2022, 20:51ညနေ 2022/01/18 15:33:37 Peter Catterall
ဒစ်ဂျစ်တယ် ခေတ် မှ ယူဆောင် လာသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား လျှင် ပလက်ဖောင်း စီးပွားရေး တိုးတက် မှုသည် အရေးအကြီးဆုံး မှာ သေချာ သည်။ စီးပွားရေး ဆက်ဆံ မှုများ၊ လူမှု ရေးဆိုင်ရာ ပါ ၀ င်မှု နှင့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ကိုအခြေခံ ကျကျ ပြန်လည် ပုံဖော် နေစဉ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်း များသည် နေ့စဉ် ဘဝ ၏ဖွဲ့စည်းပုံ တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
ဤ ပြောင်းလဲ မှုသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အများ ဆုံးဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီ ဆယ်စုနှစ် များအတွင်း တရုတ်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့်နည်းပညာ အသွင်ပြောင်း မှုသည် Alibaba , Tencent နှင့် Baidu စသည့် ကြီးမား ပြီး ဆန်းသစ် သော နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး များ၏ ထောက်ခံ မှုကို ခံခဲ့ရသည်။
ခေတ်ပြိုင် တရုတ် စားသုံး သူများ၏ အတွေ့အကြုံ များစွာကို ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်း များမှတဆင့် စစ်ထုတ် သည်။ စီး ဖို့လို ပါသလား? Didi ကိုသုံးပြီး တက္ကစီ တောင်း ပါ။ ခက်ခဲ တဲ့ မေးခွန်း ရှိ ပါသလား။ Baidu မှတစ်ဆင့် ဝက်ဘ် စာမျက်နှာ ကိုရှာဖွေ ပါ။ ဗိုက်ဆာတယ် Tencent သို့မဟုတ် Alibaba ၏ ele.me မှ ထောက်ပံ့ သော အလှအပ အဖွဲ့တွင် အမှာစာ များ ပေးပို့ ပါ
ဤ ပလက်ဖောင်း များသည် တိုင်းပြည်၏ အလုပ်သမား စျေးကွက် အပေါ်များစွာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အမျိုးသား မီဒီယာအစီရင္ခံစာ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပြည်တွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွား ရေးတွင် လုပ်သား ဦး ရေသည် သန်း ၂၀၀ အထိရှိ လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
ပလက်ဖောင်း ရင့်ကျက် လာသည်နှင့်အမျှ ဤ ကြီးမားသော ဒစ်ဂျစ်တယ် ဗိသုကာ ကိုထောက်ပံ့ သော algorithm အင်ဂျင် များသည် စားသုံးသူ ဝယ်လိုအား ကိုခန့်မှန်း ရာတွင် ပိုမို ကျွမ်းကျင် လာပြီး လုပ်သား အင်အား ကိုစီစဉ် ရာတွင် ပိုမို ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည် အချက်အလက် လုံခြုံရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် စံနှုန်းများကို သေချာစေရန် ကြိုတင် မမြင် နိုင်သော စိန်ခေါ်မှု များကို ဖြစ်ပေါ်စေ ပြီး ပိုမို အဆင့် မြင့်သော အကြောင်းအရာ ထိန်းချုပ်မှုကို ရှာဖွေရန် အားပြိုင် မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေ သည်အစီအမံတိုင်းပြည် ၏နည်းပညာ နယ်ပယ် ၏အနာဂတ် ဦး တည် ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာ မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
နောက်ထပ် အရေးကြီးသော တရုတ် နည်းပညာ နှစ် ပြီးနောက် တရုတ်၏ ပလက်ဖောင်း စီးပွားရေး အခြေအနေ မည်သို့ ရှိ သနည်း။
ပလက်ဖောင်း အလုပ်သမား စျေးကွက်
“ပလက်ဖောင်း စီးပွားရေး” ၏အယူအဆ သည် အင်တာနက် တိုးချဲ့ မှုနှင့်အတူ ဖြစ်ပေါ်လာသော အပြောင်းအလဲများကို နားလည်ရန် အသုံးဝင်သော ရှုထောင့် ကိုပေးသည်။ ရိုးရှင်းသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို ချက်သည် ယခင်က အော့ ဖ် လိုင်း တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ဒစ်ဂျစ်တယ် နယ်ပယ် သို့လွှဲပြောင်း ခြင်း ကိုရည်ညွှန်းသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်း များ နေရာ အနှံ့ တွင်ရှိ နေသောကြောင့် “ပလက်ဖောင်း အခြေပြု အလုပ်အကိုင်” ဆိုသည်မှာ အတိအကျ သတ်မှတ် ခြင်းသည် ခက်ခဲသော အလုပ် တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ Xinhua သတင်းအေဂျင်စီ ၏အစီရင်ခံစာ တွင်စုစုပေါင်း သန်း ၂၀၀ ခန့် ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်း သော်လည်း ပိုမို တင်းကြပ် သော ခွဲခြား မှုကို အသုံးပြု၍ အခြား လေ့လာမှု များက ထို အရေအတွက် ကိုသိသိသာသာ လျှော့ချခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဆို စေကာမူ ဤ ရှေးရိုးစွဲ ခန့်မှန်း ချက်များအရ တရုတ် အလုပ်သမား များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်း များနှင့် အလျင်အမြန် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်နေ ကြောင်းဖော်ပြသည်။ တစ္2018 ပြန်လည်ဆန်းစစ် ချက်များတရုတ် အလုပ်သမား ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်သည် စင်မြင့် ပေါ်တွင် အလုပ် လုပ်ရန် အကြံပြုသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၌ ၁၀% နှင့် ယူကေ တွင် ၅ ရာခိုင်နှုန်း အောက်သာရှိသည်။
နံပါတ် များနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို ချက်များကို အနှောင့်အယှက် ပေး နိုင်သော်လည်း သေချာ သည်မှာ သေချာ သည်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် စနစ် သည်တရုတ် ၏လုပ်ငန်း ကိုများစွာ ပြောင်းလဲ စေခဲ့သည်။
“အနောက် နိုင်ငံများ စွာ ၏ စကား ကဲ့သို့ ၊ (တရုတ် တွင်) ပလက်ဖောင်း အလုပ် သည် အလုပ် ၏ လွတ်လပ် ခွင့် နှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ကို မြှင့်တင် ရန် နည်းလမ်း သစ် တစ်ခု အဖြစ် မြင် ပြီး ၊ အလုပ်သမား ၏ အရည်အချင်း ကို ဈေးကွက် လိုအပ်ချက် နှင့် ကိုက်ညီ ရန် ပိုကောင်း သော နည်းလမ်း တစ်ခု အဖြစ် မြင် သည်” ဟု ဂျာနယ်လစ် တစ် ဦး က ရေးသား ခဲ့သည်အစီရင္ခံစာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ILO) က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
ILO သုတေသန တွင်ဖော်ပြထားသော တရုတ် ပလက်ဖောင်း ကို အခြေခံ၍ အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား တစ်ခုမှာ အနောက်တိုင်း အခြေအနေတွင် မ ဖွံ့ဖြိုး သေးပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ တစ် ဦး ချင်းစီ သည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု သို့မဟုတ် လက်မှုပညာ လုပ်သား များတွင်ပါ ၀ င် ခြင်း၊ ကုန် ပစ္စည်းများနှင့် အချော ထုတ်ကုန်များကို စာဖြင့် ပို့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ လက်စွဲ စာအုပ် သည် ရိုးရာ စက်မှုလုပ်ငန်း များနှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သော်လည်း စီးပွားရေး ဆက်ဆံ မှုအတွက် အခြေအနေများကို အစ ကတည်းက သတ်မှတ်ထားသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်း မှတစ်ဆင့် ကြားခံ သည်။ ဤ အမှု ၌ ၀ န်ထမ်းများကို မကြာခဏ “ကိုယ်ပိုင် အလုပ်များ” အဖြစ်သတ်မှတ် လေ့ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူတို့သည် လူမှုဖူလုံရေး ခံစားခွင့် များသို့မဟုတ် အော့ ဖ် လိုင်း စက်ရုံ ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် တရား ၀ င် ကာကွယ်မှု အချို့ကို လက်လွတ် သွားနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း အင်တာနက် ထိန်းညှိ သူ-အကြံပြု ထားသော algorithms သည် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖုံးကွယ် မထား သင့် ပါ သို့မဟုတ် မှတ်တမ်း ဇယား များကို ကြိုးကိုင် ခြယ်လှယ် သင့်သည်
သို့သော် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တရုတ် အစိုးရသည် ထူးဆန်း သော စီးပွားရေး ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆိုးကျိုး များမှ တရုတ် အလုပ်သမား များကို ကာကွယ်ရန် ပိုမို အားထုတ် ခဲ့သည်။ တိုးချဲ့ ၏အ လံ အောက်မှာ “ဘုံ ကြွယ်ဝ မှု“Drive ၊ ျပည္တြင္းမွ အင္တာ နက္ ကုမၸဏီႀကီး မ်ားကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လတြင္ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ၿပီး လက္မွတ္ထိုး ခိုင္း မည္စာခ်ဳပ္Gig ၀ န်ထမ်းများ နှင့်ပူးပေါင်း ခြင်းသည် တရုတ်၏ ပလက်ဖောင်း အခြေပြု အလုပ် ၏ မှတ်တိုင် တစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော် တရား ၀ င် အနေအထား ပြောင်းလဲမှု ရှိသော်လည်း ပလက်ဖောင်း သည် လာမည့် နှစ်နှင့် ကျော်လွန်၍ တိုင်းပြည် အတွင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များကို အဓိက ပံ့ပိုးပေး သူအဖြစ် ဆက်လက်ရှိ နေနိုင် သည်။
လက်ဝါးကြီးအုပ် တော့ မည်မဟုတ်
ပလက်ဖောင်း စီးပွားရေး ၏အဓိက ကျသော အချက်များ မှာ ကွန်ယက် သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၀ န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန် ၏တန်ဖိုး သည် သုံးစွဲသူ စုစုပေါင်း တိုးလာသည်နှင့်အမျှ တိုးလာသည်။ ပစ်မှတ် ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ ကြား ၀ င် မှုမရှိ ခြင်းကြောင့် ဤ အခြေအ နေသည် စျေးကွက် လက်ဝါးကြီးအုပ် မှုကို အမြဲတမ်း ဦး တည် စေသည်။
နှစ်များ တစ်လျှောက် တရုတ်၏ ထိပ်တန်း နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ များ၊ အထူးသဖြင့် Alibaba နှင့် Tencent တို့သည် အမှန်တကယ် စက်မှုလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီကြီး များဖြစ် လာခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုစီသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဂေဟ စနစ်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ထုတ်ကုန် အမျိုးမျိုးကို လွှမ်းခြုံ ထားသည်။ သို့သော်ဤ ကုမ္ပဏီများ ကြာမြင့်စွာ ခံစား ခဲ့ရသော မသမာ သော တိုးတက်မှု ကာလသည် အဆုံးသတ် တော့ မည်ဖြစ်သည်။
မွာဧၿပီလပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အလီ ဘာ ဘာ သည်၎င်း၏ e-commerce ဝက်ဘ်ဆိုက် တွင် သီးသန့် အလေ့အကျင့် များ ကိုအကောင်အထည်ဖော် သည်ဟု သံသယ ဖြင့် စျေးကွက် ယှဉ် ပြို င်မှုကို ခြိမ်းခြောက် ခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၂. ၈ ဘီလီယံ ထုတ်လုပ် ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ မွာေအာက္တုိဘာအလားတူ လက်ဝါးကြီးအုပ် မှုဖြင့် တရားစွဲဆို ခံရပြီးနောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၏ စားနပ်ရိက္ခာ ပို့ဆောင်ရေး ပလက်ဖောင်း သည်ဒေါ်လာ ၅ ၃၀ သန်း ဒဏ်ငွေ ရရှိခဲ့သည်။ အစောပိုင်း လက္ခဏာများ ကဤ ချဉ်းကပ် မှုသည် ၂၀ ၂၂ အထိ ဆက်လက်တည်ရှိ လိမ့်မည်ဟု ဖော်ပြသည်။
ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ် ကျောထောက်နောက်ခံစီးပွားရေး နေ့စဉ်ကျယ်ပြန့်စွာ ဖြန့်ဝေ ခဲ့သည်ဖိုင်“ပလက်ဖောင်း စီးပွားရေး အစစ်အမှန် စီးပွားရေး နှင့်အတူ နက်ရှိုင်းစွာ ပေါင်းစည်း ပါလိမ့်မယ်” ခေါင်းစဉ် လည်း နောက်ထပ် တင်းကျပ် ဖို့ တောင်းဆို နေ ပါတယ်: “မြို့တော် ၏ မတရား တိုးချဲ့ တားဆီး ဖို့ စည်းမျဉ်း လိုအပ်ချက်များ, လက်ဝါးကြီးအုပ် မှု, ဒေတာ လုံခြုံရေး နှင့် privacy ကိုကာကွယ် စောင့်ရှောက် ရေး, အင်တာနက် စက်မှုလုပ်ငန်း ရိုင်းစိုင်း တဲ့ ကြီးထွား မှု၏ အဆင့် ဆင့် မှ နှုတ် ဆက်ပြီး ပါပြီ။”
ဒၝ့အဴပင္ မဳကာ ေသး ခင္က ေရး ခဲ့တဲ့ ဥကၠ ႉထုတ္ဴပန္ ထားတဲ့ပါတီ ၏သီအိုရီ ဂျာနယ် များတွင်ဆောင်း ရှီစနေနေ့က တိုင်းပြည် မှာ ကျန်းမာရေး နဲ့ မညီ ညွတ် ဘူးလို့ ယူဆရတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တွေကို အဆုံးသတ် ဖို့နဲ့ “လက်ဝါးကြီးအုပ် မှုနဲ့ အရင်းအနှီး တွေကို စည်း စနစ်ကျ စွာ ချဲ့ထွင် မှု” ကိုတားဆီး ဖို့ တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
အတိတ် က အနိုင် ရသူ အားလုံး အခြေအ နေသည် မကြာမီ အဆုံးသတ် တော့ မည်ဖြစ်သည်။ ထူးဆန်း သော စီးပွားရေးကို လွှမ်းမိုး ရန်နှင့် အစွမ်းထက် သော algorithm ထောက်ခံချက် ဝန်ဆောင်မှုများကို ယဉ်ပါး စေရန် အခြား မကြာသေးမီက ကြိုးပမ်း မှု များနှင့်အတူ ဂိမ်း အသစ် တစ်ခုသည် တိုးတက် နေသည်ဟု ပြော ခြင်းသည် မျှတ ပါသည်။ Algorithm ထောက်ခံချက် ၀ န်ဆောင်မှုများသည် ယခင်က တရုတ်၏ ပလက်ဖောင်း စီးပွားရေး ၏ ကျောရိုး ဖြစ်ခဲ့သည်။
China Weekly: ေရခဲျပင္အတြင္းခံေလးမ်ား စတာေတြ
ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈ သတင္းမ်ား Microsoft ၏ ခြဲထြက္ လုပ္ငန္းခြဲျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္တြင္ ထိုးႏွံမႈအသစ္မ်ား ရရွိခဲ့ သူ့ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ သားကောင်ကဏ္ဍအတွက် ပြည်တွင်းအတွင်းခံဘောင်းဘီ လုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တွေကို ထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းမှာအသစ်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဘဏ္ဍာရေး၊ အလီဘာဘာနဲ့ အထက်ပိုင်းရှိ FAW ကားဆော့ဖ်ဝဲတွေကို ထောက်ပံ့တာ၊ ဘန်းမက်စ်ထောက်ခံသူဟောင်းတွေကို ဆွဲဆောင်တာ၊ ထောက်ခံသူ ၄၆၄ သန်းရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ထောက်ခံပြီး Tencent ရဲ့ ထောက်ပံ့မှုနဲ့အတူ အိန္ဒိယရဲ့ Stream ဘီလူးကြီး Gonna ကို ဘဏ္ဍာငွေ သန်း ၄၀ အကြွေးတင်ခဲ့ပါတယ်။